Awardzee: Uwafumana njani amaBhaso akwi-Intanethi | Martech Zone
Iinkampani zonxibelelwano noluntu zihlala zikhangele ukwakha ulwazi kunye nokufumana udumo kubathengi bazo. Isicwangciso esinye esihle kukuba ukuhanjiswa kwamabhaso. Amabhaso anezibonelelo ezininzi ngaphezulu kwe-pitch yomthengi ophakathi:
Amabhaso abonelela ngokutya kweendaba ezilungileyo kwiingcali ze-PR ukuma iindaba kunye neepropathi.
Iindawo zokuwonga kunye nemiboniso zihlala zihanjwa kakhulu ezifanelekileyo abaphulaphuli, ukwandisa ukufikelela kwakho.
Iindawo zokuwonga zihlala zisebenzisa iijaji eziphezulu kakhulu okunempembelelo, ke ukufumana uphawu lwakho phambi kwabo kuyinto entle.
Amabhaso izikhombisi zethemba negunya onokwabelana nokwazisa kwindawo yakho kunye namajelo entlalontle.
Ingxaki, ewe, iyazama fumana amathuba amabhaso ngaphambi kokuba ufunde ngokuphumelela kokhuphiswano lwakho kwiphephandaba lasekuhlaleni okanye kwimpapasho yorhwebo kwi-Intanethi. Ngena Umvuzo, ugcino lwedatha yamabhaso kwi-Intanethi.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo ngelixa ndandisebenza kwi-PR, ndanikwa uxanduva lokufumana amabhaso enkampani yabathengi. Kwakungumsebenzi ombi ukuba neGoogle Ezona bhaso zibalaseleyo zenkampani iiyure kunye neeyure… kunye neeyure kunye neeyure. Ke kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, mna nomhlobo wam olungileyo saqala isiseko sedatha ukwenza le nkqubo ibe lula. Nokuba ukuthengisa, i-PR, umnini-shishini, unxibelelwano, i-HR-siyathemba ukuba le ndawo iza kwenza ubomi bakho bube lula. UNick Pennebaker, Umququzeleli
I-Awardzee ikuvumela ukuba wenze ukukhangela okubhaliweyo kwamabhaso kunye nokuhluza ngengingqi kunye nodidi. Ikhonkco elinikwa ibhaso, umbutho, kunye nenqanaba kunye nommandla zibonelelwe kwiziphumo.
Ukuba bendinomnqweno omnye, ibiya kuba kukufumana uluhlu lwemihla yebhaso- kuya kuba kuhle ukubona kuphela amabhaso ebekhona ukuze angeniswe kwiintsuku ezingama-30 ezizayo kunokuba ubone onke amabhaso phaya. Kodwa ke- le yenye ye-heck yesiqalo esihle. Enkosi kuNick ngomsebenzi onzima!
Ingcebiso yomnqwazi ku UJames Hahn II Ngokuzisa iAwardzee ingqalelo yam!
tags: Mabhasoisiseko sedathaibhasofumana amabhasofumana amabhaso kwi-intanethiNick pennebakerprEyobudlelwane boluntu
Yintoni uBhengezo beBrand? Uyihlakulela Njani?